Butterfly House: Ixhotyiswe - I-Airbnb
Butterfly House: Ixhotyiswe
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguFran
ICasa Mariposa ibonelela ngendawo yokuphumla emangalisayo ngaphakathi kwindlu yethu eyenziwe ngamaplanga, ibe yenye kunye nokuchwayita kwendalo. Ilungele ukuhlala nosapho kunye nabahlobo, iCasa Mariposa idala indawo emnandi yeemfuno ezahlukeneyo, ukusuka ekuphumleni ngokupheleleyo ukuya emsebenzini ekhaya. Sinendawo entle ePunta Uva, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka ePuerto Viejo, eCocles, eChiquita naseManzanillo.
Ipropathi yethu ibonakaliswe ngokuba nobuhlobo nendalo kwaye ifanelekile ngokupheleleyo ukuphumla kunye nokuzonwabisa kwendawo. Kwisithuba impahla yethu kukho imithi ngamaplanga, esivumela sicatshulwa kwezilwanyana ekhaya, ukwenza umzekelo amanye ezincancisayo ezifana iinkawu guatusas, neentaka ezahlukeneyo ezifana iitoucan, limpets, iingcungcu, kunye neentlobo ezahlukeneyo amabhabhathane kuquka odumileyo "Blue Morpho". I-ecosystem yonke echukumisa isandi sayo, umbala kunye nobuhle.
Nokuba sichitha iintsuku ezimbalwa sinxibelelana nendalo, okanye sifumane indawo yokusebenza eyahlukileyo, indawo yethu yokuhlala ibonelela ngezinto ezifunekayo ukuze siphile ubomi obukhethekileyo, obutofotofo kunye nobumangalisayo phakathi kwehlathi lemvula elihle.
Ubumelwane kunye nepropathi yethu ikunika imvakalelo yoxolo kunye nenzolo engenakulinganiswa nanto. Phakathi kweentaba kunye neelwandle ezimangalisayo zeCaribbean. Silusapho olunobuhlobo ku-Airbnb, sinenye indlu esinokuyirenta ngaphakathi kwipropati kunye nefama engaqhelekanga apho lo ndwendwe ahlala khona. Indawo nganye inokuzimela ngokupheleleyo ... nangona kunokwenzeka ukuba sonke sigqibele singabahlobo bokwenene!
Umamkeli-ndwendwe uya kuba noxanduva lokwamkela kunye nokubonelela ngolwazi olufanelekileyo kwiindwendwe. Lo mamkeli-zindwendwe uya kuhlala kwifama emalunga neemitha ezingama-25 ukusuka kwindlwana, kwaye uzimele ngokupheleleyo, ngaphandle kokubandakanyeka kwimisebenzi yeendwendwe kwaye uya kunika nenombolo yoqhakamshelwano xa kufuneka uncedo lwabo.
Umamkeli-ndwendwe uya kuba noxanduva lokwamkela kunye nokubonelela ngolwazi olufanelekileyo kwiindwendwe. Lo mamkeli-zindwendwe uya kuhlala kwifama emalunga neemitha ezingama-25 uk…